Posted by blackroze at Saturday, October 02, 2010
မောင်လေး on2October 2010 at 10:33 said...
အဲဒီ အပျိုကြီးကို ရှာဖွေစပ်ဟပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ...။ခမဲလိုနေတာဗျ...း)
စပေ့ဘားက တချို့နေရာမှာ ကျွန်တော်လည်းခြားမရဘူး..။ပြန်ပြန်စေ့
လင်းခေတ်ဒီနို on2October 2010 at 11:56 said...
ဟုတ်ပ နက်နက်ရာ တခါတည်းကို ယောက်ကျား ပေးစားလိုက်း))))
သဒ္ဓါလှိုင်း on2October 2010 at 12:07 said...
ဟုတ်ပါ့ အပျိုကြီးတွေဆိုတာ အဲ့လို ပစိပစပ်များမှား) အဲ့တော့ အစ်မရေ ကိုယ်လည်းတစ်ချိန်ကျ အဲ့လိုအပြောမခံရလေအောင် ...... ဟဟား စတာနော် နီးရင် အဲ့ အပျိုကြီးမမ ကိုလာရှိုးပါတယ်ဗျာ ။
မေပယ်လ် on2October 2010 at 13:10 said...
တခါတခါ ဟိုဘဲလေးကအမိုက်စား ဒီဘဲလေးကအမိုက်စား...ဆိုတာလေးတွေကလည်း ညဘက်ကြားကားဆွဲသလိုကြားဖြတ်အစီအစဉ်အနေနဲ့ ပါလာသေးတာသိတယ်မှတ်လား.../
ဟိဟိ..အဲဒါ အဒူ့ကို ပြောတာလဲဟင်..
ဆွေလေးမွန် on2October 2010 at 14:46 said...
ဒါလေးများ...သယ်ရင်းနဲ့ ခင်တဲ့မင်တဲ့ .
ဘလော့ မောင်နှမတွေထဲက လွတ်တဲ့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စပ်ဟပ်ပေးလိုက်..
နားအေးပါအေး ထမင်းစားနိုင်ပြီး..ဘလော့အစ်ကိုတွေက ကျေးဇူးတင်စကား
ဟေးဟေး တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်..
ယူပြီးသွားလို့ သူတို့နာငြီးတာတော့ သူတို့အပိုင်းပေါ့လေ ..ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်တာမှ မဟုတ်တာ..ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား..
မြစ်ကျိုးအင်း on2October 2010 at 16:38 said...
ဒါမျိုးက ကြာလေ ပိုဆိုးလေ ဖြစ်မှာပဲ။
တတ်သလောက်မှတ်သလောက် အားပေး တာပါ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) on3October 2010 at 05:23 said...
ကျုပ်ကတော့ အပျိုကြီးတွေကို ထိလို့ အပျိုကြီးဘက်က နာသွားတယ်..
အပျိုကြီးဒုက္ခဆိုတာ အပျိုကြီးလုပ်ဖူးမှ သိမှာ.. မယုံရင် အပျိုကြီးလုပ်ကြည့်ပါလား ... (မထင်)
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) on3October 2010 at 07:58 said...
အပျိုကြီးတိုင်း အဲဒီလိုမျိုးတွေဘဲလား မသိဘူးနော်။ ကြောက်တယ်။း))
ညလင်းအိမ် on3October 2010 at 09:00 said...
အဟင်း အပျိုကြီးတွေများ ဆိုးပါတယ် ..း)
ဒါနဲ့ စပေ့ဘားက ဘာလို့ ရိုက်မရတာလဲ ???
စိတ်၏ဖြေရာ on4October 2010 at 03:18 said...
ချိုကျ on 8 October 2010 at 11:13 said...
အပျိုကြီးဖြစ်လို့တော့ဟုတ်လောက်ဘူးနဲ့တူတယ် :) အများအားဖြင့်တော့ ဟုတ်လောက်တယ်ထင်တယ် တချို့ အနေအေးတဲ့ အပျိုကြီးတွေမြင်ဖူးတယ်။ ဗီဇ လို့တော့ထင်တာပဲ :)
blackcoffee on 14 October 2010 at 10:44 said...
သော်ဇင်စိုး on 11 November 2010 at 12:09 said...
ဟိဟိ.. အပျိုကြီးမမတွေက ဒီလိုပါပဲ.. တစ်လောကလုံးကို မကြေိမနပ်ဖြစ်နေကြတာ..
ဒါနဲ့ အမ Blackrze ကတော့ အပျိုကြီးမဖြစ်သေးပါဘူးနော်.. :P